Nchebe site na ntachu na ihe si na ya pụta - esi echebe onwe m
Nchebe megide ntachu na nsogbu ya
Nchedo ziri ezi
Ozugbo ị ghọọ ụbụrụ
Oge ezumike bụ oge ezumike na ohere dị ukwuu ịme ụdị ọrụ niile. Na nwata na okenye ekwesịghị ichefu iji tinye ya na mbara igwe. Ma gini mere nchebe site na ntachi anya dị oke mkpa, gịnị kpatara ị ga - eji chebe akpụkpọ gị pụọ n'ọtụtụ anyanwụ na - apụta, oleekwa ụzọ kasị mma isi mee ya?
Enweghị nchebe pụọ na ntachu ahụhụ na ihe si na ya pụta
Igwe uhie nke UV nwere na ìhè anyanwụ na-emebi akpụkpọ ahụ mgbe ọ bụla ọ na-egosi ogologo oge. Tinyere ihe ndị ọzọ, nke a nwere ike ịkpata ntaramahụhụ na-egbu mgbu, nke anụ ahụ na-enwe mmetụta dị nro na nsogbu.
Nchebe megide ntachu
O nwekwara ike imeghachi omume mmeghachi ahụ.
Sunburns dị ize ndụ karịsịa, ma karịsịa n'ihi na ha nwere ike imebi ahụ ike ogologo oge, dịka ọrịa kansa.
Na ezumike, ọ dị mfe ịchọta ntachu, n'ihi na ọ na-abụkarị na ejiji ejiji.
Na mgbakwunye, otu na-echefukarị na ọ ga-ekwe omume ịnweta ntaramahụhụ ọbụna na mbara igwe ma ọ bụ na ndò dị iche iche. Ya mere, nchebe nchedo zuru oke dị oke mkpa mgbe ị na-eme njem na mba ndị na-ekpo ọkụ. Ụzọ dị mfe iji chebe onwe gị pụọ na anyanwụ bụ iyi akwa akwa.
Nchebe site na anyanwụ dị mkpa
Maka na nke a anaghị adị mma n'oge okpomọkụ, ọ ga-adị ka ìhè na ikuku dị ka o kwere mee. Nke a anaghị eme ka ị bụrụ ọsụsọ mgbe ị na-ebugharị ntakịrị. Ha na-abụkwa akụkụ nke uwe akwa ma ọ bụ dị ka parasol ọzọ.
Jiri naanị swimsuit, swimsuit ma ọ bụ bikini, ị ga-aga na mbara igwe, nke nwere nnukwu SPF. Ma eji eji akwa ma ọ bụ nke ejiji, ị ga-echefu ugogbe anya maka anwụ, nke mere ka anya chebe anya site na mgbapụ dị ukwuu. Ọ bụrụ na ị na-agbaso iwu ndị a dị mfe, ị nwere ike ugbu a gaa ezumike!
Ọ bụrụ na akpụkpọ ahụ acha ọbara ọbara dị ka akwa e ji esi nri, ị maara na ị nọ na anyanwụ ogologo oge. Ya mere, ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ọ kụrụ gị otu ugboro ma akpụkpọ ahụ na - ere ọkụ ma na - Nri creams na lotions moisturize na-enyere anụ ahụ akaghachi.
Sunburn kwadoro ọṅụ ezumike ahụ
Ọtụtụ mgbe, a na-atụ aro maka ngwaahịa ndị nwere aloe vera ma ọ bụ chamomile. Kedu enyemaka kacha mma, na-adaberekwa n'ụdị akpụkpọ ahụ, nke bụ ya mere o nwere ike bụrụ ihe bara uru iji nwetakwuo creams dị iche iche. Ihe dịkwa mma maka enyemaka mgbu, bụ envelopes ma ọ bụ mmiri dị jụụ. Tụkwasị na nke a, ị kwesịrị ịṅụ ihe dị ukwuu iji wepụ anụ ahụ nwere nsogbu.
Maka nkwụsịtụ dị oke njọ ma dị egwu, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji nweta ọgwụ ndị na-egbu egbu site n'aka dọkịta. A na - atụ aro naanị ọgwụgwọ n'ụlọ ebe ọ bụ nanị mmachi. A na-adụkarị ọdụ ka a kụziere Quark na ebe ndị emetụtara n'oge ahụhụ.
Ọ bụ ezie na nke a na-eme ka obi dịkwuo ụtọ, ma ọ pụkwara ibute ọrịa ma ọ bụ mmeghachi ahụ nfụkasị n'ihi nje bacteria dị ugbu a, bụ nke na-eme ka ọnọdụ ahụ ka njọ.
Mmekorita nwoke na nwanyị - Nchedo na Mgbaàmà | mmụta
Erotic Coloring Page - Selfie n'ihu enyo